I-TurnTo: Uphengululo lweSyndicate kunye nabaSasazi beMveliso yakho Martech Zone
I-TurnTo: Uphengululo lweSyndicate kunye nabaSasazi beMveliso yakho
NgoLwesihlanu, ngoJuni 9, 2017 NgoLwesihlanu, ngoJuni 9, 2017 Douglas Karr
Ukudibanisa yindlela esebenzayo kubathengisi abakwi-Intanethi ukuze bandise ngokukhawuleza umthamo weemveliso kunye nokujonga kwakhona (uphononongo) abalubonisayo. Amabhanti, aqala kuqala ukuqokelela umxholo obalulekileyo owenziwe ngumsebenzisi (UGC), banomdla kubathengisi ukuba babonise ezi ndawo zabo ze-eCommerce. Ngokwabelana novavanyo kunye namaqabane abo okusasaza, iimveliso zinokunceda iimveliso zivelise kwaye zithengise ngcono, njengoko ivolumu yokujonga ephezulu ibonakalisiwe ukuba iyonyusa ukuthengisa.
Kude kube ngoku, olo manyano lwalunokwenzeka kuphela valiwe uthungelwano. Ingxaki yile, le ndlela ifuna ukuba zombini iimveliso zibonelele ngohlaziyo kunye nabathengisi abafumanayo ukuba basebenzise iqonga elifanayo kwaye banesivumelwano esisesikweni sokutshintsha umxholo. Abo basebenzisa amanye amaqonga bavaliwe ngaphandle kotshintshiselwano, kwaye kwi-network brand bahlawuliswa imali eninzi ngumnikezeli wabo weqonga ukufikelela kwinethiwekhi.
I-TurnTo Networks yokuHlola ukuHlanganisa
Iinethiwekhi zeTurnTo ngumboneleli wesisombululo esilandelayo somxholo wabathengi kubathengisi abaphambili kunye neempawu. Ngesuti eyahlukileyo kwiimveliso ezine ezintsha:
Q & A yoLuntu
I-TurnTo ihambisa umxholo ngomsebenzi omncinci, uqinisekisa ubunyani bobuninzi, ukunyusa ukuguqula, ukwenziwa kweinjini yokukhangela (SEO) kunye nokuqonda kokuthengisa. Ukunceda abathengi boyise umceli mngeni wexesha elide, iTurnTo kutshanje yazise inethiwekhi evulekileyo. Ulungelelwaniso lokuHlola oluVulekileyo yonyusa kakhulu ukwabelana ngomxholo, ukuququzelela ukuphononongwa okukhulu, kunye nokusika "imirhumo yokufikelela" ehlawulwa ziinethiwekhi ezivaliweyo ngokwesiko.
kunye Ulungelelwaniso lokuHlola oluVulekileyo, Naluphi na uphawu ngoku lunokunika uphononongo kubathengisi nge-TurnTo's Customer Content Suite, nokuba yeyiphi na ingqokelela kunye neqonga lolawulo abalisebenzisayo. Akukho manyano lobuchwephesha luyimfuneko, kwaye iimveliso zinokuphononongwa kongezwe kwinethiwekhi yeTurnTo kwaye iboniswe kwiziza zamaqabane eCommerce kungaphelanga usuku okanye ezimbini.
Abathengisi bajonga kwaye balawula umxholo odibeneyo ngaphakathi kwi-TurnTo dashboard yolawulo olupheleleyo lokumodareyitha kunye nokuqonda kwengxelo. I-TurnTo ikwabonelela API ukufikelela kubarhwebi abasebenzisa amanye amaqonga-iinkqubo zelifa elakhelweyo ekhaya-banokuzuza kuhlaziyo lwemveliso okokuqala, kananjalo.
Iinethiwekhi zothungelwano ezivaliweyo azenzi ngqondo. Kufana nevenkile yokutya eqesha umntu ukuba asete imiboniso yabo yokuphela, kuphela umntu othengisa indawo yeshelfu yeprimiyamu kwiinkampani zesoda kunye neepokotho zemali. I-TurnTo's Open Review Syndication yakhelwe kwimodeli eyahlukileyo. Umxholo ngowamagama - kufuneka babelane ngawo ukunceda abathengisi babo. Inethiwekhi yeyabathengisi-kuya kufuneka bakwazi ukubonisa uphononongo nakweyiphi na into efuna ukwabiwa. Umsebenzi wethu kukwenza kube lula ukuba bobabini basebenze kunye. UGeorge Eberstadt, u-CEO we-TurnTo
I-CPO Commerce, ethengisa izixhobo zamandla kuzo zonke iimveliso eziphambili, itshintshele kwi-TurnTo's Open Review Syndication kunye namava anamandla anamandla. Ngaphambili, umthengisi wayesebenzisa uthungelwano oluvaliweyo, kwaye ngenxa yokuba uninzi lweemveliso kunye nabavelisi abathenga iimveliso zeCPO babengekho kwiqonga lenethiwekhi, baphoswa kukudityaniswa kovavanyo olunokubakho, abathengisi abadanileyo abanqwenela ukuthatha inxaxheba kodwa abakwazanga .
Ngobuchwephesha be-TurnTo, i-CPO iphindaphindwe kabini kwinani leemveliso apho bafumana khona umxholo odibeneyo ngelixa besonyusa inani elipheleleyo lohlolo oluboniswe ngaphezu kwe-250 ipesenti.
Funda nzulu malunga neTurnTo evulekileyo yokuHlola ukuHlola
tags: BOSECPOUrhwebo lweCPOukuvulwa kwamashishini okuhlaziyaukuhlolwa kwemvelisoReviewsuphononongo oludibeneyoJikela kwi
I-OTT yeTekhnoloji ithatha njani iTV yakho